ဒိုင်ယာနာ - ဝီကီပီးဒီးယား
ဝေလမင်းသမီး၊ Duchess of Rothesay
(m. 29 July 1981, div. 1996)
ဝေလမင်းသမီး ဒိုင်ယာနာသည် ဗြိတိန်တော်ဝင်မိသားစုဝင် တဦး ဖြစ်သည်။ နန်းမွေခံ ဝေလမင်းသား ချားလ်၏ ဇနီးဦး ဖြစ်ကာ၊ ဝီလျံနှင့် ဟယ်ရီ မင်းသား နှစ်ပါး၏ မိခင် ဖြစ်သည်။ သူမ၏ လူမှုရေးဝင်ဆံ့မှုနှင့် ကျက်သရေကြောင့် နိုင်ငံတကာပုံရိပ်ဖြစ်လာပြီး၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ဗရုတ်သုက္ခ ဘဝကို ပုံကြီးချဲ့ခြင်း ခံရကာ၊ ဘယ်သွားသွား အများပြည်သူ၏ မျက်စိဒေါက်ထောက် ကြည့်ခံရလောက်အောင် နာမည်ကျော်ကြားခဲ့သည်။
ဗြိတိန် သူကောင်းမျိုး၌ ဒိုင်ယာနာကို မွေးဖွားပြီး၊ ဆန်ဒရင်ဂမ်အိမ်ကြီးတွင် တော်ဝင်မိသားစုနှင့် နီးကပ်စွာ ကြီးပြင်းလာသည်။ ၁၉၆၇ တွင် မိဘဖြစ်သော အဋ္ဌမမြောက် အားလ်စပင်ဆာ ခေါ် ဂျွန်စပင်ဆာ နှင့် ဖရန်စဲ ရှမ်း ကီးဒ် တို့ ကွာရှင်းပြတ်စဲရာ၊ အငယ်ဆုံးသမီး ဖြစ်သော သူမအပေါ် အလွန် ထိခိုက်သည်။ ပညာရေး၌ ထူးထူးခြားခြား မရှိသော်ငြား၊ ဂီတ၊ အက နှင့် အားကစားတွင်မူ အရည်အချင်း ရှိသည်။ ၁၉၇၈ တွင် လန်ဒန်သို့ ပြောင်းရွှေ့ပြီး၊ အခန်းဖော်များနှင့် နေထိုင်ကာ၊ လစာနိမ့်အလုပ်အမျိုးမျိုးကို လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။
ဒုတိယအဲလိဇဘက်ဘုရင်မ၏ သားကြီး၊ လူပျိုပင် သိပ်မလှည့်သော ချားလ်မင်းသားနှင့် စေ့စပ်လိုက်သည့်အခါ ၁၉၈၁ တွင် ဒိုင်ယာနာသည် ထင်ရှားလာသည်။ စိန့်ပေါလ်ဘုရားကျောင်း၌ ၁၉၈၁ တွင် မင်္ဂလာဆောင်ပြီး၊ ဝေလမင်းသမီးဟု ပြည်သူက လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ လက်ခံကြသည်။ စုံတွဲသည် ဝီလျံနှင့် ဟယ်ရီဟူ၍ သားနှစ်ယောက် ထွန်းကားရာ၊ အိမ်ရှေ့စံနေရာ၌ ဒုတိယနှင့် တတိယအသီးသီး ရရှိသည်။ သို့သော်ငြားလည်း၊ ဒိုင်ယာနာ၏ အိမ်ထောင်ရေးသည် သူတို့အချင်းချင်း သဟဇာတမဖြစ်မှု၊ အိမ်ထောင်ရေး ပွေရှုပ်မှုများကို ခံစားရသည်။ သူတို့ ဆက်ဆံရေး အခြေအနေ ဆိုးရွားပြတ်တောက်နေသည်ကို လူထုက သိရှိသွားပြီး မကြာမီ၊ ၁၉၉၂ တွင် ခွဲနေထိုင်သည်။ အိမ်တွင်းရေး အခက်အခဲများ၏ အသေးစိတ်လည်း လူသိရှင်ကြား ပေါက်ကြားသွားပြီး၊ ၁၉၉၆ တွင် ကွာရှင်းလိုက်ရာ အိမ်ထောင်ရေး တခန်းရပ်သွားသည်။
ဝေလမင်းသမီးတပါးအနေဖြင့်၊ ဒိုင်ယာနာသည် ဘုရင်မ၏ ကိုယ်စား နန်းတွင်းအမှုတော်များကို ထမ်းဆောင်ကာ၊ ဓနသဟာယဒေသတွင်း လုပ်ငန်းဆောင်တာများ၌ ကိုယ်စားပြုရသည်။ အလှူအတန်းများတွင် လုပ်နေကျအတိုင်း တရားဝင် ချဉ်းကပ်ခြင်း မပြုသည့်အတွက် မီဒီယာများက ဂုဏ်ပြုကြသည်။ အစောပိုင်း သူမ၏ ထောက်ပံ့အားပေးမှုများမှာ လူငယ်နှင့် ကလေးများအပေါ် အဓိကထားသော်လည်း နောက်ပိုင်း အေအိုင်ဒီအက်စ်လူနာများနှင့် မြေမြှုပ်မိုင်းများဖယ်ရှားရေး ကမ်ပိန်း၌ ပါဝင်သောကြောင့် လူသိများလာသည်။ ကင်ဆာ၊ စိတ်မကျန်းမာ ခံစားနေရသော လူနာများကို ကူညီရန် လူထုသိအောင် အားပေးခဲ့သည်။ မင်းသမီးအနေဖြင့်၊ ဒိုင်ယာနာ ရှက်တတ်သော်လည်း၊ နောက်ပိုင်း သူမ၏ ဩဇာတိက္ကမနှင့် ဖော်ရွေမှုတို့ကြောင့် လူထုက ချစ်မြတ်နိုးပြီး၊ သူမ အိမ်ထောင်ရေး ဆိုးဆိုးရွားရွား ပြိုလဲသည့်တိုင် ဂုဏ်သတင်း မညှိုးမှိန်ခဲ့ရပေ။ ဓာတ်ပုံအလွန်စားသည်ဟု အသိအမှတ်ပြုခံရသော သူမသည် ၁၉၈၀ ပြည့်နှင့် ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်များတွင် ဖက်ရှင်တွင် ထိပ်ခေါင် ဖြစ်သည်။ ၁၉၉၇ ပါရီလှိုင်ခေါင်း၌ ကားအက်ဆီးဒင့်ဖြစ်ကာ၊ ဒိုင်ယာ သေဆုံးသည့်အခါ၊ အသုဘချသည့်အခါ၊ မီဒီယာများနှင့်တကွ ပြည်သူလူထုက အကြီးအကျယ် ပူဆွေးဝမ်းနည်းကြသည်။ အဖိုးတန်သော သူမကို ဆုံးရှုံးရခြင်းသည် တော်ဝင်မိသားစုနှင့် ဗြိတိန်အသိုင်းအဝိုင်းတွင် နက်ရှိုင်းသော ထိုးနှက်မှု တခု ဖြစ်ခဲ့သည်။
၂ ပညာရေးနှင့် အလုပ်အကိုင်
၃.၃ Problems and separation
ဒိုင်ယာနာ ဖရန်စက် စပင်ဆာကို ၁၉၆၁ ဇူလိုင် ၁ ရက်နေ့တွင် ဆန်ဒရင်ဂမ်ရှိ ပါ့က်အိမ်တော်၌ မွေးသည်။ ဂျွန်စပင်ဆာ (အားလ်စပင်ဆာ)(အောသော့ မြို့စားကြီး)(၁၉၂၄-၁၉၉၂)၊ ဖရန်စက် စပင်ဆာ (အောသော့မြို့စားကတော်)၊ ဘာရွန် ဖဲရမွန် စသော (၁၉၃၆-၂၀၀၄)မွေးချင်းငါးယောက်အနက် လေးယောက်မြောက် ဖြစ်သည်။ စပင်ဆာမိသားစု မျိုးဆက်ပေါင်း များစွာ ကြာအောင် ဗြိတိန်တော်ဝင်မိသားစုနှင့် အလွန် နီးစပ်သည်။ ဒိုင်ယာနာ၏ အဖွားများ၊ စင်သီယာ စပင်ဆာ (Cynthia Spencer)နှင့် ရုသ် ရော့ချီ (Ruth Roche)တို့သည် အဲလိဇဘက်ဘုရင်မထံ သတို့သမီးကညာလောင်းအဖြစ် ခစားလာခဲ့သည်။ စပင်ဆာတို့သည် မိသားစုမျိုးဆက်ကို ပြန့်ပွားနိင်ရန် သားယောက်ျား တဦး မွေးဖွားလာရန် မျှော်လင့်သော်လည်း၊ သူမအမေ၊ ပြီးလျှင် သူမအဒေါ် ဒိုင်ယာနာရစ္စဲ (ဘဲ့ဒ်ဖို့မြို့စားကတော်, လေဒီဒိုင်ယာနာစပင်ဆာ)(Diana Russell) ပြီးနောက်၊ ဒိုင်ယာနာ ဖရန်စက် မတိုင်ခင်အထိ မည်သူမှ သားယောက်ျားလေးအတွက် နာမည်တလုံး ရွေးချယ်ရခြင်း မရှိချေ။
ဩဂုတ် ၃၀ တွင် ဒိုင်ယာနာကို ဆန်ဒရင်ဂမ်ရှိ စိန့်မာရီ မက်ဒလင်းဘုရားကျောင်းဝယ် နှစ်ခြင်းခံ ပြုသည်။ , မွေးချင်းသုံးဦးနှင့်အတူ ကြီးပြင်းလာသည်။ ၎င်းတို့မှာ ဆာရာ၊ ဂျိန်း နှင့် ချားလ်တို့ ဖြစ်သည်။ ဒိုင်ယာနာကို မမွေးမီ ၁နှစ်အလိုက အစ်ကိုတော် ဂျွန်သည် မွေးပြီး ချက်ချင်း ဆုံးသည်။ မျိုးဆက်လိုအပ်နေသော စပင်ဆာမိသားစုတွင် စိတ်ဒဏ်ရာ ရသွားသည်။ လေဒီ အောသော့ကို လန်ဒန်ရှိ ဟာလေလမ်း ဆေးရုံ (Harley Street clinics) သို့ တင်ပြီး မည်သို့ ဖြစ်ရသည်ကို အကြောင်းရင်း ရှာဖွေသည်။ ထိုအတွေ့အကြုံကို ဒိုင်ယာနာ့ မောင်ငယ် ချားလ်က “ကျုပ်မိဘတွေအတွက် ကြောက်မက်ဖွယ် ကာလပဲ ဖြစ်တယ်၊ ကွာရှင်းရခြင်းရဲ့ ရင်းမြစ်လည်း ဖြစ်နိုင်တယ်၊ ဘာလို့ဆို သူတို့ ဖြတ်ကျော်နိုင်ခြင်း မရှိခဲ့လို့ပဲ”ဟု ထုတ်ဖော်ခဲ့သည်။ ဆန်ဒရင်ဂမ်နယ်မြေပေါ်ရှိ ပါ့က်အိမ်တော်တွင် ဒိုင်ယာနာ ကြီးပြင်းလာသည်။ အိမ်တော်ကို ပိုင်သူ အဲလိဇဘက်ဘုရင်မ(၂)က စပင်ဆာတို့ကို ကံကြွေးချထားသည်။ တော်ဝင်မိသားစုသည် အနီးအနားရှိ ဆန်ဒရင်ဂမ် အိမ်တော်တွင် အားလပ်ရက်အပန်းဖြေလေ့ရှိရာ၊ ဒိုင်ယာနာသည် ဘုရင်မ၏ မင်းသား အင်ဒရူး (Prince Andrew)နှင့် မင်းသား အက်ဒဝပ် (Prince Edward)တို့နှင့် ကစားသည်။
သူမမိဘ ကွာရှင်းချိန်၊ ဒိုင်ယာနာ ခြောက်နှစ်သား ရှိပြီ။ သူမမိခင်သည် နောက်တော့ ပီတာရှမ်းကစ်(Peter Shand Kydd)နှင့် အကြောင်းပါပြီး၊ ၁၉၆၉ တွင် လက်ထပ်သည်။ ၁၉၆၇ အိမ်ခွဲနေကြတုန်းက၊ ဒိုင်ယာနာ လန်ဒန်၌ မိခင်နှင့်အတူ နေသော်လည်း၊ ထိုနှစ် ခရစ္စမတ် အားလပ်ရက်တွင်တော့၊ အရှင်အောသော့သည် ဒိုင်ယာနာကို မိခင်နှင့်အတူ ပြန်ပေးနေခွင့် မပြုတော့ချေ။ မရှေးမနှောင်းမှာပင် ယောက္ခမဟောင်း ဖြစ်သူ လေဒီ ဖဲရမွန်ဆီမှ ဒိုင်ယာနာအုပ်ထိန်းခွင့်ကို ရသွားသည်။ ၁၉၇၆ တွင် ဒါးမောက်မြို့စားကတော် ရိမ်း (Raine)နှင့့်အိမ်ထောင်ပြုသည်။ ထိုအခါ မိထွေးဖြစ်သူနှင့် ဆက်ဆံရေး ဆိုးရွားသည်။ သူမသည် ရိမ်းကို အနိုင်ကျင့်သူဟု သမုတ်ပြီး၊ မကောင်းကြံသည်။ တခါဝယ်၊ ဒိုင်ယာနာသည် သူမကို “လှေကားထစ်မှ တွန်းချသည်”။ နောက်ပိုင်း ဒိုင်ယာနာက မိမိကလေးဘဝသည် အလွန်ပင် မပျော်ရွှင်ရ၊ မတည်ငြိမ်ရပါဟု ထုတ်ပြောသည်။". နောက်ပိုင်း ၁၉၇၅ တွင် သူမဖခင် အားဘွဲ့ ခံရသောအခါ၊ ဒိုင်ယာနကို လေဒီ ဒိုင်ယာနာဟု ခေါ်လာကြသည်။ ပါ့က်အိမ်တော်မှ တမိသားစုလုံးလည်း နော့သမ်ပတန်ရှိုင်းယားရှိ စပင်ဆာရာထူးရှိရာ အောသော့သို့ ပြောင်းရွှေ့သည်။
အစတွင် ဒိုင်ယာနာသည် အုပ်ထိန်းသူ ဂါးထရု အယ်လင် (Gertrude Allen) ကြီးကြပ်မှုအောက်၌ အိမ်တွင် စာသင်ယူရသည်။ နော်ဖော့(Norfolk)ရှိ ဂေးတန်(Gayton)၌ ဖွင့်လှစ်သော စီဖီး()သီးသန့်ကျောင်းတွင် ပုံမှန်ပညာရေးကို စတင်ရပြီး၊ အသက် ၉ နှစ်တွင် သက်ဖို့ဒ်(Thetford)အနီးရှိ မိန်းကလေးဘော်ဒါကျောင်းဖြစ်သော ရစ်ဒယ်ဆွာ့ (Riddlesworth) ဟောကျောင်းသို့ ပြောင်းရွှေ့သည်။ ၁၉၇၃ တွင် ကန့်ပြည်နယ်၊ ဆဲဗင်နုတ် (Sevenoaks) ရှိ သူ့ညီအစ်များရှိရာ ဝက်စ်ဟဲ (West Heath) မိန်းကလေးကျောင်းသို့ သွားတက်သည်။ ကျောင်းပညာရေးသည် မတောက်ပြောင်ခဲ့ပေ။ GCE O-level စာမေးပွဲကို နှစ်ခါကျသည်။ လူမှုစိတ်ဓာတ်ထူးချွန်သူဆု (outstanding community spirit)ကိုမူ ဝက်စ်ဟဲကျောင်းက အသိအမှတ်ပြု ချီးမြှင့်သည်။ ၁၆ နှစ်တွင် ဝက်စ်ဟဲမှ ထွက်သည်။ ဒိုင်ယာနာသည် ထိုစဉ်က ရှက်တတ်သူ ဖြစ်ကြောင်း မောင်ငယ် ချားလ်က ပြောပြသည်။ တွဲဖက် စန္ဒရားတီးသူအဖြစ် သူသည် ဂီတတွင်တော့ ပါရမီ ပြနိုင်ခဲ့သည်။ ရေကူးနှင့် ဒိုင်ဗင်လည်း ထူးချွန်ပြီး၊ ဘဲလေးနှင့် တောက်တောက် (Tap dance) အကလည်း လေ့လာသည်။
ဆွစ်ဇာလန်၊ ရူဂမောက် (Rougemont) ရှိ အယ်လဖင် ဗီဒမနက်တီ တက္ကသိုလ် (Institut Alpin Videmanette)၌ နှစ်ဝက်တခုသာ တက်ပြီး၊ ၁၉၇၈ အီစတာ နှစ်ဝက်တွင် ထွက်လာပြီးနောက်၊ ဒိုင်ယာနာ လန်ဒန်ပြန်လာပြီး၊ မိခင်တိုက်ခန်းတွင် ကျောင်းနေဖက်သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက်နှင့် အတူနေသည်။ လန်ဒန်တွင် ဟင်းချက်သင်တန်း တက်သော်လည်း၊ အခန်းဖော်များကို ချက်ကျွေးသည်က မရှိသလောက် ဖြစ်သည်။ အလုပ်လုပ်ရသော လစာမှာ မမြင့်ချေ။ လူငယ်များအတွက် အကနည်းပြ အဖြစ် လုပ်သော်လည်း၊ စကီးစီးစဉ် ထိခိုက်မှု ဖြစ်ပြီး၊ အလုပ်မှ သုံးလ နားလိုက်ရသေးသည်။ နောက် မူကြိုလက်ထောက်ဆရာမ အလုပ်ရသည်။ အစ်မဖြစ်သူ ဆာရာနှင့်တကွ သူငယ်ချင်းများကို အိမ်သန့်ရှင်းရေး လုပ်ပေးတတ်သည်။ ပါတီများတွင် အိမ်ရှင်သဖွယ် ဧည့်ထောက်ခံတတ်သည်။ လန်ဒန်မှာ နေထိုင်သော အမေရိကန်မိသားစု ရောဘတ်ဆန်တို့ဆီ၌ ကလေးထိန်းလည်း လုပ်ပြီး၊ ပင်လီကို (Pimlico) ရှိ လူငယ်အင်္ဂလန်ကျောင်း၌ မူကြို လက်ထောက်ဆရာမ လုပ်သည်။ ၁၉၇၉ ဇူလိုင်တွင် မွေးနေ့လက်ဆောင်အဖြစ် မိခင်က ကိုလဟင်းရုံးတော် (Coleherne Court)တွင် တိုက်ခန်း တခန်း ဝယ်ပေးသည်။ ထိုနေရာတွင် သူငယ်ချင်း သုံးဦးနှင့်အတူ ၁၉၈၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ထိ နေထိုင်သည်။
၁၉၇၇ နိုဝင်ဘာ ၁၆ ဒိုင်ယာနာ အသက် ၁၆ တွင် ဘုရင်မ၏ သားကြီး ချားလ်ကို ဦးဆုံး စတွေ့သည်။ ချားလ်က လေဒီ ဆာရာကို စတွဲသည်။ ၁၉၈၀ နွေကာလတွင် ကျေးလက်ဒေသသို့ အပန်းဖြေသွားရာ သူတို့လည်း ဧည့်သည်အဖြစ် လိုက်ပြီး၊ ဒိုင်ယာနာသည် သူ ပိုလိုကစားသည်ကို ကြည့်နေလေ့ ရှိရာ၊ ချားလ်သည် ဒိုင်ယာနာကို အတည်အတံ့ သတိုးသမီးအဖြစ် စိတ်ဝင်စားခဲ့သည်။ ဆက်ဆံရေး တိုးတက်မှု ရှိပြီးသောအခါ ကိုဝီ (Cowes) ရှိ ရွက်လွင့်သတ္တပတ် (a sailing weekend)အတွက် နိုင်ငံခြား တော်ဝင်ရွက်လှေသို့ ဒိုင်ယာနာကို ဖိတ်သည်။ ၁၉၈၀ နိုဝင်ဘာတွင် မင်းသားမိသားစုကို တပတ်ကြာ တွေ့ဆုံရန် တော်ဝင်မိသားစု စကော့အိမ်တော(the royal family's Scottish residence)် ဖြစ်သော ဘာမိုရယ် ရဲတိုက် (Balmoral Castle)သို့ ဖိတ်လေပြီ။ လေဒီဒိုင်ယာနာကို မယ်တော် ဘုရင်မနှင့် အီဒင်ဘာမြို့စားဖြစ်သော ဖိလစ်မင်းသား (Prince Philip, Duke of Edinburgh) တို့က ကောင်းစွာ လက်ခံသည်။ ချားလ်မင်းသားသည် ဒိုင်ယာနာကို လန်ဒန်တွင် မကြာခဏ လာလူပျိုလှည့်သည်။ ၁၉၈၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၆ တွင် မင်းသားက လက်ထပ်ခွင့် (proposed) တောင်းရာ လေဒီဒိုင်ယာနာ လက်ခံလိုက်သော်လည်း၊ သူတို့ စေ့စပ်မှုကို နောက် ရက်သတ္တပတ်များထိ လျှို့ဝှက်ထားခဲ့သည်။
ဖိုင်:British coin 25p (1981) reverse.jpg
၁၉၈၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄ တွင် စေ့စပ်ခြင်း အတည် ဖြစ်သည်။  ဒိုင်ယာနာသည် စိန် ၁၄ ပွင့်ပါသော စေ့စပ်လက်စွပ်ကြီးကို ရွေးချယ်လိုက်သည်။ စိန်အပြင် ၁၈ ကာရက်ရှိ အဖြူရောင် ရွှေသား (white gold)၌ ၁၂ ကာရက်ရှိ ဘဲဥပုံ အပြာရောင် သီဟိုဠ်ထွက် နီလာ (oval blue Ceylon sapphire set) တစုံ ရံထားသော လက်စွပ် ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၀ တွင် ၎င်းလက်စွပ်သည် ကိန်းဘရစ်မြို့စားကတော် ကက်သရင်း၏ စေ့စပ်လက်စွပ် ဖြစ်လာသည်။ မယ်တော်ဘုရင်မသည် ဒိုင်ယာနာကို စေ့စပ်လက်ဆောင်ပဏ္ဏာအဖြစ် နီလာနှင့် စိန်ခြယ် ရင်ထိုး တခု ပေးသည်။  စေ့စပ်ပြီးနောက် ဒိုင်ယာနာသည် မူကြိုလက်ထောက်အလုပ်မှ ထွက်ပြီး၊ မယ်တော်ဘုရင်မ၏ အိမ်တော် ဖြစ်သော ကလဲရင့် အိမ်ကြီး (Clarence House) တွင် ခဏတဖြုတ် နေသည်။ နောက် မင်္ဂလာပွဲအထိ ဘတ်ကင်ဟန်နန်းတော် (Buckingham Palace) ၌ နေထိုင်သည်။ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၃၀၀ ကျော်က အန်နီဟိုက် (Anne Hyde) ကတည်းက ထီးနန်းညွန့်လျာနှင့် လက်ထပ်ထိမ်းမြားရာ၌ ဒိုင်ယာနာသည် ပထမဦးဆုံးသော အင်္ဂလိပ်လူမျိုး အမျိုးသမီး ဖြစ်လာပြီး၊ စေ့စပ်သည့်အချိန်ထိ အခစားလုပ်နေသော ပထမဆုံး တော်ဝင်သတို့သမီး လည်း ဖြစ်လာသည်။ ၁၉၈၁ မတ်တွင် ဂိုးစမစ်ခန်းမ(Goldsmiths' Hall)ဝယ် ချားလ်မင်းသားနှင့် အတူ ဦးဆုံးကြိမ် အဖြစ် လူထုရှေ့မှောက် ပွဲထွက်လာရာ၊ မိုနာကိုမင်းသမီးဖြစ်သူ ဂရေ့ကယ်လီ(Grace Kelly)နှင့် တွေ့ဆုံသည်။
တော်ဝင်မင်္ဂလာပွဲအခမ်းအနားအတွက် အများအားဖြင့် အသုံးပြုသော ဘုရားကျောင်း ဖြစ်သည့် ဝက်မင်စတာ ဘုရားရှိခိုးကျောင်း(Westminster)ထက် ထိုင်ခုံနေရာ ပိုဆံ့သော စိန့်ပေါ ကက်သီဒရယ် (St. Paul Cathedral) ဘုရားကျောင်းဝယ် ၁၉၈၁ ဇူလိုင် ၂၉ တွင် အသက် ၂၀ ရှိသော ဒိုင်ယာနာသည် ဝေလမင်းသားနှင့် လက်ထပ်သည့်အခါ ဝေလမင်းသမီး ဖြစ်လာသည်။ ကြီးကျယ်ခမ်းနားလှသော မင်္ဂလာပွဲအဖြစ် သတ်မှတ်ခံရကာ၊ ကမ္ဘာတဝန်းလုံးမှ တီဗီပရိသတ် သန်း ၇၅၀ စောင့်ကြည့်နေကြစဉ်၊ ပွဲလာ လမ်းကြောင်းတွင် စုံတွဲကို အမိအရ မြင်ချင်သော ပွဲကြည့်ပရိသတ်သည် လမ်းများတွင် တန်းစီစောင့်မျှော်နေကြသည်မှာ လူပေါင်း ၆ သိန်း ရှိလေသည်။  စင်မြင့်၌ ဒိုင်ယာနာသည် “ဖိလစ် ချားလ်” အာသာ ဂျော့ ဟု ပြောရမည့်အစား ချားလ်၏ အရှေ့နာမည် ၂လုံးကို ပြောင်းပြန် လွဲဆိုမိသည်။  “နာခံပါ့မည်”ဟုလည်း မပြောချေ၊ ထိုအစဉ်အလာ သစ္စာဆိုခြင်းကို စုံတွဲ၏ တောင်းဆိုချက်အရ ချန်လှပ်ခဲ့ရာ၊ အမြဲ ထောက်ပြအငြင်းပွားစရာ ဖြစ်နေသည်။ ဒိုင်ယာနာ့ မင်္ဂလာပွဲဝတ်စုံသည် စတာလင်ပေါင် ၉၀၀၀ တန်ဖိုးရှိကာ၊ အမြီး ၂၅ ပေ (၇.၆၂ မီတာ) ရှည်သည်။ ဝေလမင်းသမီး ဖြစ်လာသည်နှင့်၊ မယ်တော်နှင့် ဘုရင်မ ပြီးလျှင် ဗြိတိန်၏ ဝါစဉ်အရ တတိယအမြင့်ဆုံး အမျိုးသမီးနှင့် ညီမျှသော အဆင့်အတန်းကို ရရှိကာ၊ အခြားနယ်ပယ်များတွင်မူ ဘုရင်မ၊ သက်ဆိုင်ရာ နယ်စားပယ်စား(relevant viceroy)၊ အီဒင်ဘာမြို့စား၊ ဘုရင်မမယ်တော်နှင့် ဝေလမင်းသားတို့နောက်မှ လိုက်ပြီး ရာထူးစဉ်စီသော် ပဉ္စမ သို့ ဆဋ္ဌမနေရာ ရသည်။ မင်္ဂလာဆောင်ပြီး နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းတွင်၊ ဘုရင်မသည် ဒိုင်ယာနာကို တော်ဝင်မိသားစုဝယ် လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာ တိုးမြှင့်ပေးသည်။ မင်းသမီးကို ကိန်းဘရစ်ချစ်သူ ခေါ်သော သရဖူ (Cambridge Lover's Knot Tiara) ကို ငှားပေးပြီး၊ အဲလိဇဘက်ဘုရင်မ ၂ ၏တော်ဝင်မိသားစုဝင်တံဆိပ်ကို ပေးသနားသည်။ 
စုံတွဲသည် တက်ဘာရီ (Tetbury) အနီး၊ ကင်ဆင်းတန်နန်းတော် (Kingsington Palace) နှင့် ဟိုက်ဂရဗ် အိမ်တော် (Highgrove House) ၌ နေထိုင်သည်။ ၁၉၈၁ နိုဝင်ဘာ ၅ တွင် ကြင်ယာတော်၌ သန္ဓေတည်ပြီဟု တရားဝင် ကြေညာသည်။ ကိုယ်ဝန်တည်ပြီး ဆယ့်နှစ်ပတ်အကြာ ၁၉၈၂ ဇန်နဝါရီတွင် ဆန်ဒရင်ဂမ်အိမ်တော် လှေကားထစ်မှ လိမ့်ကျရာ၊ နန်းတွင်း သားဖွားမီးယပ်ဆရာဝန် (gynaecologist) ဆာ ဂျော့ ပင်ကာ (Sir George Pinker)ကို လန်ဒန်မှ ဆင့်ခေါ်ရသည်။ သူစစ်ဆေးလိုက်ရာ ဒိုင်ယာနာတွင် ပြင်းထန် ပွန်းပဲ့ဒဏ်ရာ တွေ့ရသော်လည်း၊ သန္ဓေသားသည် အထိအခိုက်မရှိဟု ဆိုသည်။  နောင်တွင် ဒိုင်ယာနာ ဝန်ခံသည်မှာ သူမသည် ထက်နေကြည် (so inadequate) ဖြစ်နေသည်ဟု ခံစားရသောကြောင့် လှေကားမှ တမင်တကာ လှိမ့်ချလိုက်ခြင်းဟူ၏။  ၁၉၈၂ ဖေဖော်ဝါရီတွင်၊ ဟောလီးဒေးထွက်နေသော ဒိုင်ယာနာ၏ ဘီကီနီဝတ် ကိုယ်ဝန်ပုံကို မီဒီယာက ထုတ်ဝေသည်။ မရှေးမနှောင်းမှာပင် ဘုရင်မက ကြေညာစာ ထုတ်ပြီး၊ “ဗြိတိန်ဂျာနယ်လစ်လောကတွင် အမှောင်မိုက်ဆုံး နေ့” (the blackest day in the history of British journalism)ဟု သမုတ်လိုက်သည်။ 
၁၉၈၂ ဇွန် ၂၁ တွင် စုံတွဲ၏ သားဦး ဝီလျံမင်းသားကို ဒိုင်ယာနာ ဖွားမြင်သည်။  မီဒီယာက မည်မျှပင် ဝေဖန်သော်ငြား၊ နီတာတာသာ ရှိသေးသော ဝီလျံကို ခေါ်ပြီး၊ သူမ၏ ပထမဦးဆုံး ခရီးစဉ်ဖြစ်သော ဩစတြေးလျနှင့် နယူးဇီလန်သို့ ခရီးထွက်ရန် ဆုံးဖြတ်ရာ၊ လူအများက ထောက်ခံအားပေးကြသည်။ ဒိုင်ယာနာ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့် ဩစတြေးလျဝန်ကြီးချုပ် မယ်လကွန် ဖရာဆာ(Malcolm Fraser) အကြံပြုချက် မတိုင်ခင်အထိ၊ ဝီလျံကို ခေါ်ထားရန် အစက မကြံရွယ်ပေ။
ဒုတိယသား ဟယ်ရီမင်းသားကို ၁၉၈၄ စက်တင်ဘာ ၁၅ တွင် မွေးသည်။  မင်းသမီးက ပြောသည်မှာ ဟယ်ရီကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အတွင်း မင်းသားနှင့် အနီးစပ်ဆုံး ဖြစ်ခဲ့သည်ဟူ၏။ ဒုတိယကလေးသည် ယောက်ျားလေး ဖြစ်ကြောင်း သိရသော်လည်း၊ ဝေလမင်းသားအပါအဝင် မည်သူကိုမျှ တစွန်းတစပင် ထုတ်ဖော် မပြောပြချေ။ 
ဒိုင်ယာနာသည် သားများကို ပုံမှန်တော်ဝင်ကလေးငယ်များထက် အမြင်ပိုကျယ်အောင် ဖွင့်ပေးသည်။ မင်းသားနှင့် တော်ဝင်မိသားစု၏ ဩဇာကို နာခံလိုက်နာခဲ(rarely deferred)ပြီး၊ ကလေးများနှင့် ပတ်သက်လာလျှင် မလိုက်လျောဘဲ ခေါင်းမာ(intransigent)လေ့ရှိသည်။ ကလေးများကို ပထမဦးဆုံးပေးသော နာမည်များကို မိမိဘာသာ ရွေးသည်။ တော်ဝင်မိသားစု အထိန်းတော်ကို ဖြုတ်ပစ်ပြီး၊ ကိုယ့်စိတ်တိုင်းကျ ရွေးထားသော တယောက်ကို ခန့်သည်။ ကလေးများ၏ ကျောင်းနှင့် အဝတ်အစားကို ရွေးသည်။ အပျော်ခရီးထွက်ဝတ်စုံများ(outings)ကို စီစဉ်သည်။ အစီအစဉ်များမှ အချိန်ရရင် ရသလို ကိုယ်တိုင် ကျောင်းလိုက်ပို့သည်။ အချိန်ဇယားများတွင် လူထုတာဝန်များကိုလည်း ကိုယ်တိုင် စီမံသည်။ 
Problems and separation[ပြင်ဆင်ရန်]
၁၉၈၆ တွင် ယောက်မြို့စားနှင့် မြို့စားကတော်တို့၏ မင်္ဂလာပွဲပြီးနောက် ဝေလမင်းသားနှင့် ကြင်ယာတော်
လက်ထပ်ပြီး ငါးနှစ်ကြာသော်၊ စုံတွဲ၏ အသက် ၁၃ နှစ် ကွာခြားမှုနှင့် ပလဲနံပ မသင့်မှုတို့မှာ မြင်သာလာအောင် ယိုယွင်းပျက်စီးလာသည်။ ချားလ်သည် ရည်းစားဟောင်း ကာမီလာ ပါကာ ဘောင်းလဲ့ (Camilla Parker Bowles) နှင့် ပြန်တွဲပြီး၊ ဒိုင်ယာနာသည် တော်ဝင်မိသားစု၏ မြင်းစီးနည်းပြဟောင်း မေဂျာ ဂျိမ်း ဟူးဝစ် (James Hewitt) နှင့် စတင်ဇာတ်လမ်းရှိသည်။ ဟူးဝစ်နှင့် ဟယ်ရီတို့ကြား ရုပ်သွင်ပုံပန်း အထောက်အထား မပြနိုင်ဘဲ တူညီနေသည်ကို ထောက်ပြီး၊ ဟယ်ရီ၏ ဖခင်သည် ချားလ်မဟုတ်ဘဲ ဟူးဝစ်ဖြစ်သည်ဟု မီဒီယာက ပုံကြီးချဲ့သော်လည်း၊ ဟူးဝစ်နှင့် ကျန်သူများက ငြင်းဆိုသည်။ ဟယ်ရီကို ဟူးဝစ်နှင့် ဒိုင်ယာနာ ဇာတ်လမ်းမစမီ နှစ်နှစ်အလွန်က မွေးခဲ့သည်။
၁၉၈၉ တွင် ကာမီလာညီမ အန်နာဘဲ အဲလိယော့ (Annabel Elliot)၏ မွေးနေ့ပါတီပွဲ တခု၌ ချားလ်၏ ခြေရှုပ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကာမီလာနှင့် ထိပ်တိုက်တွေ့သည်။  ထိုအဖြစ်အပျက်ကို နောက်တော့ ၁၉၉၂ မေလတွင် ထုတ်ဝေသော အင်ဒရူး မော်တန် (Andrew Morton)ရေးသည့် “ဒိုင်ယာနာ၊ သူမရဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်” (Diana: Her True Story) စာအုပ်ထဲတွင် ဖွင့်ချထားသည်။ မင်းသမီး၏ သတ်သေချင်လောက်အောင် စိတ်လက်မချမ်းသာမှုကို ဖွင့်ထုတ်ပြထားသော ထိုစာအုပ်သည် မီဒီယာများကို မုန်တိုင်းထန်စေခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းမှာ မော်တန် ပြောပြသည်က ၁၉၉၁ ခုတွင် ဒိုင်ယာနာမင်းသမီးနှင့် လျှို့ဝှက်သော အင်တာဗျူး တခု လုပ်ခဲ့ပြီး၊ ဒိုင်ယာနာသည် သူမ၏ အိမ်ထောင်ရေးကိစ္စနှင့် အခက်အခဲများကို ပြောဆိုခဲ့သည်ဟူ၏။  မိဘဖြစ်သော ဘုရင်မနှင့် အီဒင်ဘာမြို့စားတို့သည် ချားလ်နှင့် ဒိုင်ယာနာကို ခေါ်တွေ့ပြီး၊ ပြန်လည်သင့်မြတ်အောင် ကြိုးပမ်းသော်လည်း၊ အရာမထင်ချေ။ ဖိလစ် (အီဒင်ဘာမြို့စား) သည် ဒိုင်ယာနာဆီ စာရေးကာ၊ သူမနှင့် ချားလ်တို့နှစ်ဦးစလုံး အိမ်ထောင်ပြင်ပတွင် ခြေရှုပ်မှုများကို စိတ်ပျက်မိကြောင်း ဖော်ပြပြီး၊ သူတို့၏ အပြုအမူများကို အခြားရှုထောင့်မှ ပြန်လည် ချင့်ချိန်သင့်ကြောင်း ပြောသည်။  မြို့စားကြီးက တဲ့တိုး ဆန်ပြီး၊ ဒိုင်ယာနာက အထိမခံရွှေပန်းကန် ဖြစ်နေသည်။ စာများသည် လက်ခံနိုင်ရန် ခက်ခဲပြီး၊ သို့သော်လည်း စေတနာကောင်းနှင့် ဆက်ဆံပုံကို ဒိုင်ယာနာ ချီးကျူးသည်။ မင်းသမီးနှင့် ယောက္ခမဟောင်း ဖိလစ်မင်းသားတို့ ဇာတ်လမ်းရှိသည်ဟု ဒိုင်ယာနာ၏ အရင်းနှီးဆုံးသူငယ်ချင်း ဆီမွန်နီ ဆင်းမွန်း (Simone Simmons) အပါအဝင် လူအချို့က စွပ်စွဲသည်။ သို့သော်လည်း လေ့လာသူများက သူတို့စာများတွင် ဤအကြောင်းကို သက်သေပြုနိုင်သည့် သံသယ အရိပ်အယောင် မရှိဟု ပြောသည်။ 
၁၉၉၂ နှင့် ၁၉၉၃ အတွင်း၊ ဝေလမင်းသားနှင့် မင်းသမီးတို့ နှစ်ဦးစလုံးကို အသရေ ထိခိုက်စေသော တယ်လီဖုန်းပြောစကားများ ဖမ်းထားသည့် တိတ်ခွေများ ပေါက်ကြားသွားသည်။ မင်းသမီးနှင့် ဂျိမ်း ဂီးဘီ (James Gilbey)တို့ ပြောစကားများကို မှတ်တမ်းတင်ထားသည့် တိတ်များသည် ၁၉၉၂ ဩဂုတ်တွင် လူသိရှင်ကြားကုန်သည်။, ထိုလတွင်ပင် စာသားများဖြင့်ပင် ထုတ်ဝေလာကြသည်။ ၁၉၉၂ နိုဝင်ဘာတွင် ကာမီလာအကြောင်း ပေါက်ကြားသော တိတ်များ (Camillagate) ကြောင့် (Squidgygate)ဆိုသော ဆောင်းပါး ဆက်ထွက်လာပြီး၊ မင်းသားနှင့် ကာမီလာတို့ကြား အတွင်းကျသော ဆက်ဆံရေးများအကြောင်းကို အတင်းအဖျင်းဂျာနယ်များတွင် မြိန်ရေရှက်ရေ ဖော်ပြလာကြသည်။ ၁၉၉၂ ဒီဇင်ဘာတွင် ဝန်ကြီးချုပ် ဂျွန်မေဂျာက စုံတွဲသည် ဘုံအိမ်တော် (House of Commons)၌ ငြိမ်းချမ်းစွာ အိမ်ခွဲနေထိုင်ကြောင်း ကြေညာသည်။ ၁၉၉၂ နှင့် ၁၉၉၃ ကြားတွင် လူထုကြား စကားပြောသည့် အသံကို တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် ဒိုင်ယာနာသည် အသံနည်းပြ ပီတာဆက်တလင်း (Peter Settelen)ကို ငှားရမ်းသည်။ ၁၉၉၂ ခုတွင် ဆက်တလင်း မှတ်တမ်းတင်ထားသော ဗွီဒီယိုတိတ်ခွေ တခွေတွင်၊ ၁၉၈၄ မှ ၁၉၈၆ ထိ၊ ဤပတ်ဝန်းကျင်၌ အလုပ်လုပ်နေသော တစုံတဦးနှင့် နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ကြိုက်ဖူးသည်ဟု ဒိုင်ယာနာ ဝန်ခံထားသည်။ ဤသည်မှာ သူ့မန်နေဂျာက ဒိုင်ယာနာနှင့် သူ၏ ဆက်ဆံရေးသည် မသင့်လျော်ဟု ဆုံးဖြတ်ပြီး၊ ၁၉၈၆ တွင် သံတမန် ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့သို့ ပြောင်းရွှေ့ခံရသော ဘာရီ မန်နာကီး (Barry Mannakee) ကို ဒိုင်ယာနာ ရည်ညွှန်းခြင်းဟု ထင်ကြသည်။ သူတို့နှစ်ဦး ဇာတ်လမ်းဖြစ်နေသည်ဟု ကောလာဟလသတင်းထွက်လာပြီးနောက် မန်နာကီးလည်း သူမ၏ ဘော်ဒီဂတ်အဖြစ်မှ ကန်ထုတ်ခံရကြောင်း ဒိုင်ယာနာက တိတ်ခွေထဲတွင် ပြောသည်။ ပင်နီဂျူနာက သူမ၏ ၁၉၉၈ စာအုပ်ထဲတွင် မင်းသမီးသည် မန်နာကီးနှင့် ရိုမန်တစ်ဆက်ဆံရေး ရှိခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ ဒိုင်ယာနာ့ သူငယ်ချင်းများက ထိုအကြောင်းကို အခြေအမြစ်မရှိဟု ပယ်ချသည်။ သို့သော် မရှေးမနှောင်း ဆက်ထွက်လာသော တိတ်ခွေများ၌ ဒိုင်ယာနာက တစုံတယောက်အပေါ် ခံစားချက်များ ရှိခဲ့ကြောင်း “သူနဲ့ ထွက်သွားပြီး အတူနေချင်တာ”ဟူ၍ ပြောထားသည်။ ၎င်းနှင့် လိင်ဆက်ဆံရေးကို သူမ ငြင်းပယ်ခဲ့သော်လည်း၊ နှစ်ယောက်မရှိသော အကောင်းဆုံး သူငယ်ချင်းပေဟု ဖော်ပြသည်။ သူမယောက်ျားနှင့် ပတ်သက်၍မူ “ကျွန်မကို ထက်နေမကြည်အောင် နည်းမျိုးစုံနဲ့ လုပ်တယ်၊ ကျွန်မ စိတ်ကြည်လာပြီဆို သူက ရိုက်ချတော့တာပဲ”ဟု ခါးသီးစွာ ပြောသည်။ ချားလ်အဒေါ် မာဂရက်မင်းသမီး (Princess Margaret)က ၁၉၉၃ တွင် ဘုရင်မမယ်တော်ထံ ဒိုင်ယာနာ ရေးလာသော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာပါနေသည့် စာများကို မီးရှို့ပစ်သည်။ အတ္ထုပ္ပတ္တိရေးသူ ဝီလျံ ရှောခရော့ (William Shawcross)က သူမမိခင်နှင့် အခြားမိသားစုဝင်များကို ကာကွယ်လိုသောကြောင့်၊ မာဂရက်၏ အပြုအမူသည် နားလည်ပေးနိုင်သော်လည်း၊ သမိုင်းဝင် ရှုထောင့်တခုအတွက်မူ နှမြောစရာ ဖြစ်ကြောင်း ဆိုသည်။  ကာမီလာ ပါကာ ဘောင်းလဲ့ကို အိမ်တွင်းရေးပြဿနာများအတွက် အပြစ်တင်သော်လည်း၊ ဒိုင်ယာနာသည် မကြာမီ သူမယောက်ျားသည် အခြား ခြေပုန်းခုတ်နေသည်များ ရှိကြောင်း စတင် သဘောပေါက်လာသည်။ ၁၉၉၃ အောက်တိုဘာတွင် ဒိုင်ယာက သူမ၏ အိမ်စေ ပေါ ဘားရယ် (Paul Burrell)ကို စာရေးပြီး၊ ချားလ်သည် တခါက သူတို့သား၏ ကလေးထိန်း ဖြစ်ဖူးသော သူ့ကိုယ်ရေးလက်ထောက် တစ်ဂီ လဂ် ဘောခဲ့ (Tiggy Legge-Bourke)နှင့် ကြိုက်နေကြောင်း၊ တစ်ဂီကို လက်ထပ်နိုင်ရန် လမ်းကြောင်းရှင်းအောင် သူမကို သတ်ရန် စီစဉ်နေသည်ဟု ယုံကြည်ကြောင်း ဆိုသည်။ လဂ် ဘောခဲ့ကို မင်းသားက သူ့သားများကို အုပ်ထိန်းစဉ်က အဖော်ရအောင် ငှားရမ်းခဲ့သည်။  ၁၉၉၄ ဇွန် ၂၉ တွင် ဂျိုနသန် ဒင်းဘယ်ဘီ (Jonathan Dimbleby)နှင့် တယ်လီဗေးရှင်း အင်တာဗျူးမှ တဆင့် လူထုက နားလည်ပေးရန် တောင်းခံခဲ့သည်။ အင်တာဗျူးတွင်၊ ကြင်ယာတော်နှင့် သူ့အိမ်ထောင်ရေး ပြန်လည်တည်ဆောက်မရနိုင်လောက်အောင် ကွဲပြတ်သွားပြီနောက်မှ ၁၉၈၆ တွင် ကာမီလာနှင့် ဆက်ဆံရေး ပြန်အစပြုခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
↑ The Life of Diana, Princess of Wales 1961-1997။ BBC။3June 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Asatitled royal, Diana held no surname, but, when one was used, it was Windsor
↑ ၇.၀ ၇.၁ Morton 1997, p. 71.
↑ Chua-Eoan, Howard (16 August 2007). "The Saddest Fairy Tale". Time. Retrieved on3February 2017. “... she died, suddenly, the day after the 36th anniversary of her christening ...”
↑ "Diana 'I thought of running off with lover'"၊7December 2004။ 23 April 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 23 April 2018။
↑ Morton၊ Andrew (22 June 2017)။ Diana: Her True Story – In Her Own Words: The Sunday Times Number-One Bestseller။ Michael O'Mara Books။ ISBN 9781782436935။ 25 April 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၁.၀ ၁၁.၁ ၁၁.၂ ၁၁.၃ "International Special Report: Princess Diana, 1961–1997"၊ The Washington Post၊ 30 January 1999။ 13 October 2008 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 19 August 2000။
↑ "Queen Mother on 'abhorrent' Diana, Princess of Wales"၊ The Telegraph၊ 17 September 2009။ 24 April 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 8 May 2015။
↑ ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named TeenageRoyal
↑ ၁၄.၀ ၁၄.၁ "1981: Charles and Diana marry"၊ BBC News၊ 29 July 1981။ 27 November 2008 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on7March 2008။
↑ Frum၊ David (2000)။ How We Got bare: The '70s။ New York: Basic Books။ p. 98။ ISBN 0-465-04195-7။
↑ Denney၊ Colleen (April 2005)။ Representing Diana, Princess of Wales: cultural memory and fairy tales revisited။ Fairleigh Dickinson University Press။ p. 57။ ISBN 978-0-8386-4023-4။ 25 April 2016 တွင် မူရင်းမှ မော်ကွန်းတင်ပြီး ။ 30 April 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Field၊ Leslie (2002)။ The Queen's Jewels: The Personal Collection of Elizabeth II။ London: Harry N. Abrams။ pp. 113–115။ ISBN 0-8109-8172-6။
↑ Lucy Clarke-Billings။ "Duchess of Cambridge wears Princess Diana's favourite tiara to diplomatic reception at Buckingham Palace"၊9December 2015။ 29 December 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 25 December 2015။
↑ "Duchess Kate 'to receive special honour from the Queen' to celebrate Her Majesty's record reign"၊ Hello Magazine။ 25 February 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Obituary: Sir George Pinker"၊ 1 May 2007။ 22 December 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 13 November 2012။
↑ "US TV airs Princess Diana tapes"၊ BBC၊5March 2004။ 23 April 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Timeline: Diana, Princess of Wales"၊ BBC၊5July 2004။ 29 May 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "1982: Princess Diana gives birth to boy"၊ BBC။ 17 May 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Hewitt denies Prince Harry link"၊ BBC News၊ 21 September 2002။ 23 April 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 15 February 2009။
↑ "Prince William Biography"။ 15 October 2008 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 30 October 2008။
↑ "Prince Harry" . People. Retrieved on 15 October 2008.
↑ ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named “BBC-Hewitt"
↑ Holder, Margaret (24 August 2011)။ Who Does Prince Harry Look Like? James Hewitt Myth Debunked။ The Morton Report။ 29 May 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ "Diana tells of Camilla encounter"၊ BBC၊ 12 March 2004။3August 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Diana tapes reveal Camilla confrontation"၊ 12 March 2004။3August 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Interview: Andrew Morton: He couldn't shout: 'Diana was in on this.' 'She trusted me. It would have beenabetrayal'"၊ The Independent၊ 1 December 1997။7January 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 8 January 2017။
↑ "Princess Di breaks down after making appearance"၊ 12 June 1992။ 14 August 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Sabur၊ Rozina။ "Princess Diana secretly recorded herself describing despair at the state of her marriage to Prince Charles, biographer reveals"၊ 10 June 2017။ 8 March 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 16 November 2017။
↑ ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named “Burrell-Hasnat"
↑ Allen၊ Nick။ "Prince Philip sent 'nasty, cruel' letters to Diana"၊ The Telegraph၊ 11 January 2008။5February 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 24 May 2008။
↑ Alderson၊ Andrew။ "Diana and Prince Philip: the truth"၊ The Telegraph၊ 14 October 2007။2February 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on4February 2017။
↑ "Princess Diana's 'admirer' named by Press"၊ 27 August 1992။ 14 August 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named “robinson"
↑ Brandreth၊ Gyles (2007)။ Charles and Camilla: Portrait ofaLove Affair။ Random House။ pp. 257–264။ ISBN 978-0-09-949087-6။
↑ "Diana tapes filmed by voice coach to air on Channel4documentary"၊ The Guardian၊ 24 July 2017။ 30 July 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 29 July 2017။
↑ ၅၂.၀ ၅၂.၁ "Diana 'wanted to live with guard'"၊ BBC News။ 31 July 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 31 July 2017။
↑ ၅၃.၀ ၅၃.၁ "The Mannakee file" (in en)၊ The Daily Telegraph၊ 12 December 2004။ 31 July 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 31 July 2017။
↑ Lawson၊ Mark (7 August 2017)။ Diana: In Her Own Words – admirers have nothing to fear from the Channel4tapes။ The Guardian။ 20 September 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 22 October 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Conspiracy theorists feast on inquiry into death of Diana's minder"၊ 8 December 2004။ 31 July 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 1 August 2017။
↑ ၅၆.၀ ၅၆.၁ New Book Casts Shadow Over Diana။ CBS News (26 October 1998)။7March 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Curry၊ Ann (6 December 2004)။ Princess Diana tapes: Part 2။ NBC News။ 17 August 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။7March 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Anderson၊ Kevin။ "Diana tapes captivate America"၊ BBC၊5March 2004။3August 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Rayner၊ Gordon။ "Princess Margaret destroyed letters from Diana to Queen Mother"၊ The Daily Telegraph၊ 17 September 2009။7January 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 8 January 2017။
↑ Rosalind Ryan။ "Diana affair over before crash, inquest told"၊ The Guardian၊7January 2008။ 13 October 2008 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Rayner၊ Gordon။ "Princess Diana letter: 'Charles plans to kill me'"၊ The Daily Telegraph၊ 20 December 2007။ 19 October 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 23 January 2008။
↑ Tiggy Legge-Bourke။ The Guardian (12 October 1999)။7January 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The Princess and the Press။ PBS။ 10 March 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။7January 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Timeline: Charles and Camilla's romance"၊ BBC၊6April 2005။7January 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on2February 2017။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဒိုင်ယာနာ&oldid=697206" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၃ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၉:၅၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။